နွားရိုင်း စွမ်းရည်ပြသမှုပွဲတွင် ပေါင်ချိန် (၁၇၀၀) ကျော် အလေးချိန်ရှိတဲ့ နွားရိုင်းတက်နင်းမှုကြောင့် လူတစ်ဦး သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား။ – SoShwe
Home/Other/နွားရိုင်း စွမ်းရည်ပြသမှုပွဲတွင် ပေါင်ချိန် (၁၇၀၀) ကျော် အလေးချိန်ရှိတဲ့ နွားရိုင်းတက်နင်းမှုကြောင့် လူတစ်ဦး သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား။
နွားရိုင်း စွမ်းရည်ပြသမှုပွဲတွင် ပေါင်ချိန် (၁၇၀၀) ကျော် အလေးချိန်ရှိတဲ့ နွားရိုင်းတက်နင်းမှုကြောင့် လူတစ်ဦး သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား။
admin January 21, 2019	Other Leaveacomment
နွားရိုင်းစွမ်းရည် ပြသရာတွင် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး စွမ်းရည်ပြသနေစဉ်အတွင်း တက်နင်းခံရ၍ သေဆုံးသွားတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခု အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ မစ်ဆိုရီပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် မေဆန်လူဝီလို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ နွားရိုင်းစွမ်းရည်ပြသရာမှာ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဇန်နဝါရီ (၁၅)ရက်နေ့က National Western Stock Show မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ နွားရိုင်းစွမ်းရည်ပြပွဲမှာ နွားရိုင်းတက်နင်းခံရပြီး သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နွားရိုင်းစီးနင်းရာတွင် ကမ္ဘာ့အဆင့် (၁၈)အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရသူ မေဆင်ဟာ ပေါင်ချိန် (၁၇၀၀)ကျော်ရှိတဲ့ Hard Times လို့ခေါ်တဲ့ နွားရိုင်းကြီးရဲ့ ရင်ဘတ်တည့်တည့် တက်နင်းတာခံရပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မျက်မြင်သက်သေအချို့ရဲ့ ပြောပြချက်တွေအရ မေဆင်ဟာ ရင်ဘတ်ကို တင်းကြပ်စွာ ဆုပ်ကိုင်ရင်း ခြေလှမ်းအနည်းငယ် လျှောက်လာပြီးနောက် မြေကြီးပေါ် ပစ်လဲကျခဲ့ကာ ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်နေချိန်အတွင်းမှာပဲ သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
Previous John Wick ဇာတ်ကားအဆက်ဖြစ်တဲ့ John Wick Chapter –3Parabellum Trailer တရားဝင်ထွက်ရှိလာ။
Next ??????????????? ???????????? ???????????? ?????????????? ??????????????????? ?????????
ဘရာဇီးနိုငျငံ၌ လိငျပွောငျးထားသူမြားနဲ့ လိငျတူခဈြသူမြားအား ဖိနှိပျသူမြားကို ဥပဒအေရအရေးယူ အပွဈပေးတော့မညျဖွဈကွောငျး တရားဝငျထုတျပွနျကွညောလိုကျပွီဖွဈပွီး အဆိုပါ လိငျပွောငျးနဲ့လိငျတူခဈြသူမြားအပျေါ ညှငျးပနျးနှိပျစကျသူမြားအနဖွေငျ့ ထောငျဒဏျ (၅) နှဈ ကခြံရမညျလညျး ဖွဈပါတယျ။ …